गाउँपालिका उपाध्यक्षले बोल्न नपाएपछि…..(भिडिओसहित)
जाडोमा गर्भवतीलाई कस्तो समस्या देखिन्छ ? सतर्कता कसरी अपनाउने ?
विराटनगर, २१ कात्तिक । मोरङको ग्रामथान गाउँपालिका–७ मा निर्माण भएको एकीकृत नमूना बस्ती हस्तान्त्रण कार्यक्रममा बोल्न नपाएपछि गाउँपालिका उपाध्यक्ष फूलकुमारी चौधरीले असन्तुष्टि जनाएकी छन् ।
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई सहभागी भएको कार्यक्रममा आफूले बोल्न नपाएपछि असन्तुष्टि जनाएकी हुन् ।
शुक्रबार कार्यक्रमको सेड्युल बनाउँदा उपमेयर चौधरीलाई स्वागत मन्तब्य राख्न दिने तयारी थियो । मुख्यमन्त्रीको कार्य व्यस्तताको कारण कार्यक्रम छोट्याउँदा सेड्युलबाट स्वागत मन्तब्य हटाइएकाे थियाे ।
काठमाडौं जाने तयारीमा रहेका मुख्यमन्त्रीलाई ढिलो हुने भन्दै स्वागत मन्तब्य नराखिएको कार्यक्रममा ६ जनाले बोलेका थिए ।
अचानक आफ्नो नाम काटिएको भन्दै उपमेयरले कार्यक्रम सकिनेबितिकै स्टेजमा अध्यक्षसँग असन्तुष्टि जनाइन् । ‘कार्यक्रम छोटो हुने भनिएको थियो । तर लामो समय चल्यो,’ उनले भनिन्, ‘स्वागत मन्तब्यबाट मेरो नाम किन हटाइयो ?’
कार्यक्रम सकिएपछि गाउँपालिका अध्यक्ष शिवनारायण माझीलाई उनले बाइपास गरेको भन्दै मञ्चमै र्‍याखर्‍याख्ती बनाएकी थिइन् । अध्यक्षले समय नभएको र मिस्टेक भयो भन्दै पटकपटक सम्झाउँदा पनि उनले आफ्ना जनतासामु कुरा राख्न नदिएको गुनासाे गरिन ।
कार्यक्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्र आङ्बो, सामाजिक विकास मन्त्री जीवन घिमिरे, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री विजय विश्वास, संघीय सांसद अमनलाल मोदी र गाउँपालिका अध्यक्ष शिवनारायण माझीले सम्बोधन गरेका थिए ।